हाम्रो वेबसाइटमा भ्रमण र किनमेल गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
निम्न नियम र सर्तहरू छन् जुन हाम्रो ढुवानी नीति गठन गर्दछ।
1. नमूना अर्डरको लागि
स्टकमा नमूनाहरूको लागि, वितरण समय लगभग7दिन हो। अर्डर द्वारा पठाइनेछ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्त सेवा मेसिनरी बाहेक। हामीले तपाईंको भुक्तानी प्राप्त गरेपछि डेलिभरी समय प्रभावकारी हुनेछ।
2. सामान्य ढुवानी नीति ढुवानी प्रशोधन समय बारे
धेरैजसो उत्पादनहरू स्टकमा उपलब्ध छन् र भुक्तानी निपटान पछि 7-15 कार्य दिन भित्र डेलिभर गरिनेछ। कृपया ढुवानी अघि फेरि हामीसँग डेलिभरी ठेगाना पुष्टि गर्नुहोस्।
अर्डरहरू पठाइएका छैनन् वा सप्ताहन्त वा छुट्टिहरूमा डेलिभर गरिएका छैनन्। यदि हामीले अर्डरहरूको उच्च मात्राको अनुभव गरिरहेका छौं भने, ढुवानी केही दिन ढिलो हुन सक्छ। कृपया डेलिभरीको लागि ट्रान्जिटमा थप दिनहरू दिनुहोस्। यदि तपाईंको अर्डरको ढुवानीमा महत्त्वपूर्ण ढिलाइ हुनेछ भने, हामी तपाईंलाई इमेल वा टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्नेछौं।
3. OEM र ODM आदेशहरूमा
हाम्रा सबै उत्पादनहरूले OEM र ODM सेवा स्वीकार गर्न सक्छन्। विशेष अनुकूलित उत्पादनहरू वा विशेष अर्डरहरूको लागि, हामी तपाईंसँग कुराकानी गर्नेछौं र अन्तमा PI को सहमत डेलिभरी मिति पालना गर्नेछौं। कुनै पनि अवस्थामा, हामी तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
4. शिपिंग दरहरू र वितरण अनुमानहरू
ढुवानी शुल्कहरू निर्णय गरिनेछ र चेकआउटको समयमा तपाईंलाई सूचित गरिनेछ। विभिन्न ढुवानी विधिहरूद्वारा तपाईंको अर्डर अनुसार शुल्क र डेलिभरी समय फरक हुनेछ।
5. ढुवानी पुष्टि र अर्डर ट्र्याकिंग
एकचोटि हामीले तपाईंको अर्डरहरू पठाएपछि, हामी तपाईंलाई एक पुष्टिकरण इमेल पठाउनेछौं जसले सबै अर्डर विवरणहरू, ट्र्याकिङ आईडी, र लिङ्क संलग्न गर्नेछ; मद्दत संग, तपाईं आफ्नो अर्डर ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईं आफ्नो अर्डर ट्र्याक गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।